Momba an'i Wanyu | Shanghai Wanyu Medical Equipment Co., Ltd.
Misafidiana zavatra iray mandritra ny androm-piainany.
Mifantoha amin'ny fanaovana ny vokatra lanja lehibe kokoa.
Ny fitiavana manamboatra vokatra dia manana fanahy.
Tamin'ny volana jona 2003, ny orinasa dia nanambola tamin'ny fananganana orinasa manokana momba ny fampandrosoana sy ny famokarana fitaovam-pitsaboana ho an'ny efitrano fandidiana. Taorian'ny fananganana ny orinasa, talenta siantifika sy teknolojia marobe ary mpiasa efa zatra tsara no noraisina ary nangonina hanangana sy hanatsara ny fitantanana orinasa. Amin'izao fotoana izao, ny vokatray rehetra dia nandalo CE sy ISO fanamarinana.
Amin'izao fotoana izao, ny orinasanay dia namolavola latabatra fandefasana asa maro, andian-jiro fandidiana tsy misy aloka, pendant medika, tetezana fampiatoana ICU ary vokatra hafa momba ny fitsaboana. Ireo vokatra ireo dia mitana toerana ambony any Sina ary azo ampidirina mba hahafeno ny fepetra takiana amin'ny hopitaly isan-karazany. Amidy eran'izao tontolo izao izy io ary derain'ny mpampiasa be mpampiasa.
Tsy mihoatra ny folo ireo injenieran'ny R&D tompon'andraikitra amin'ny fitohizan'ny R&D sy ny fanavaozana ny vokatra isan-karazany, fa ny fihazonana ny fiaraha-miasa maharitra amin'ny oniversite maro koa.
Izahay vahaolana dia nandalo ny fanamarinana fahaizana nasionaly ary noraisina tsara tao amin'ny indostrianay manan-danja. Ny ekipanay injeniera manampahaizana manokana dia vonona matetika hanompo anao amin'ny fizahana sy ny valiny.